September 2016 ~ ဒေါက်တာလီးကြီး
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com. Thursday, September 29, 2016
ဒီမှာဒေါင်းပါ Read More
မော်လိုက်ကစော် ဖီးတက်ပြီးပို့ပေးတာ အပိုင်း ၂
မော်လိုက်ကစော် ဖီးတက်ပြီးပို့ပေးတာ - ၁
တဲထဲကအတွဲ မြန်မာ အသစ်
ဒီမှာ​ဒေါင်းပါ Read More
အဖုတ်လဲနာနေပြီ ထုတ်လိုက်ရင်ပြန်ထည့်ရတာခက်တယ် - မြန်မာ
Eye Contact (ထိုင်း၁၈+++)
M က နိုင်ငံခြားကနေ အခုမှပြန်ရောက်လာတဲ.လူငယ်တယောက်ပါ။ ပြန်ရောက်တော. အဖိုးဖြစ်သူက သူ.အလုပ်မာပဲလာကူလုပ်ဖို.ခေါ်ထားပါတယ်။
အဖိုးအခုပ်မာပါ မန်နေဂျာက ချောချောလှကောင်မလေးပါ။ M က အမြဲ မျက်မှန်အနက်တပ်ထားတာပါ။ အလုပ်ကကောင်မလေးတွေကဒါကို တအားစိတ်ဝင်စားကြပါတယ။် မိန်နေဂျာမလေးအပါအဝင်ပေ.ါ။ အလုပ်သမားခေါင်းကတော. ယောကျာ်းလေးပါ။M နဲ. အလုပ်သမားခေါင်းနဲ.ပေါင်းပီး ဆော်လေးတွေကို စားတဲ. ဇာတ်လမ်းလေးပါ။
Download and Watch with P cloud Link 300MB Read More
ကမ္ဘာ့မိန်းကလေး မြန်မာ 8
ကမ္ဘာ့မိန်းကလေး မြန်မာ 7
ကမ္ဘာ့မိန်းကလေး မြန်မာ 6
ကမ္ဘာ့မိန်းကလေး မြန်မာ 5
ကမ္ဘာ့မိန်းကလေး မြန်မာ 4
ကမ္ဘာ့မိန်းကလေး မြန်မာ 3
ကမ္ဘာ့မိန်းကလေး မြန်မာ 2
ကမ္ဘာ့မိန်းကလေး မြန်မာ ၁
DOWNLOAD HERE PCLOUD Read More
ကိုကိုရေ န်ိ့ လိုက်စို့ နေတယ်
သစ်ပင်ကြီး အောက်ကချစ်သူများ ( ၉ )
အဖုတ်လဲနာနေပြီ ထုတ်လိုက်ရင်ပြန်ထည့်ရတာခက်တယ် - မြန...
မယားကြီးရှိတဲ့ ကျွန်မချစ်သူ (သို့မဟုတ်) Rigodon 20...
Lazy Hazy Crazy 2015 (မြန်မာစာတန်းထိုး)
ထမီလှန်ဖင်ကား fb က မမ
ကုသိုိလ်တော်ဘုရားနားက ကျောင်းသူလေးပါ ( ချောင်းရိုက...
ရေချိူးချောင်းရိုက် ( ၅ )
ရေချိူးချောင်းရိုက် ( ၄ )
ရေချိူးချောင်းရိုက် ( ၃ )
ရေချိူးချောင်းရိုက် ( ၂ )
ရေချိူးချောင်းရိုက် ( ၁ )
ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးခြင်း ချောင်းရိုက်များ 10 ကား
Sin Sisters2( ထိုင်း ၁၈++)
Wearing No Underwear Tour Operators (ဂျပန် ၁၈++)
Mom's Friend2(ကိုရီးယား၁၈+++)
Mom's Friend (ကိုရီးယား၁၈+++)
- မြန်မာလို့တော့ပြောပါတယ် ပေးပို့သူက
အိမ်ထောင်သည်တွေ ခလေးရှေ့မှာတော့ မလုပ်သင့်ဘူးထင်တယ်...
Personal Attack ကြောင့် လိုင်းပေါ်ရောက်လာတဲ့ကားပါ။